काग्रेँसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले नै पुल निर्माणको ९० बोरा सिमेन्ट चोरेपछी……. « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
काग्रेँसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षले नै पुल निर्माणको ९० बोरा सिमेन्ट चोरेपछी…….
नवलपरासीको कावासोतीमा निर्माण भइरहेकाे पुलबाट जनप्रतिनिधिले नै सिमेन्ट चोरी गरेकाे पाइएकाे छ । कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर १ र देवचुली नगरपालिका वडा नम्बर ९ जोडने गरी निर्माणाधिन लोकाहाको भोटीखोला पुलको सिमेन्ट वडा अध्यक्षकै संलग्नतामा चोरी भएको हो ।
पुल निर्माणका लागि राखिएको ९० बोरा सिमेन्ट कावासोती नगरपालिका वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष नारायण पन्तको संलग्नतामा पुल निर्माणमा खटिएका सुपरभाइजर गोपाल थापासहितका व्यक्तिले चोरी गरे पछि स्थानीय आक्रोशित बनेका छन् । पुल निर्माणकै क्रममा सिमेन्ट चोरी भएपछि पुल निर्माणको कार्य समेत राेकिएकाे छ । पुल निर्माणका लागि बसेका सुपरभाइजर र वडा अध्यक्षको मिलेमतोमा चैत्र ११ गते राति सिमेन्ट चाेरी भएको हो ।
राति १२ बजेको समयमा वडा अध्यक्ष नारायण पन्तले स्टोरको चाबी खोल्न लगाएर ट्याक्टरमा लोड गरी सिमेन्ट लगेका थिए । भोटी खोला निर्माण व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष घनलाल भुषालका अनुसार अध्यक्ष पन्तले मदिरा सेवन गरी राति पुल निर्माणस्थलमा पुगेको र सिमेन्ट निकालेको स्वीकार गरेका छन् । वडा अध्यक्षले आफूले सबै थाहा नपाएको र सुपरभाइजरले आफूलाई फसाएको भन्ने गरेको भुषालले बताए । वडाध्यक्ष पन्त नेपाली काँग्रेसबाट टिकट पाएर विजयी भएका हुन् ।
वडा अध्यक्ष पन्त यसअघि वन मुद्धामा जेलसमेत परेका थिए । वन मुद्धामा फरार भएका पन्त चुनाव घोषणा भएपछि सजाय भुक्तान गरी वडा अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका थिए । त्यो पुल जेभिसी बिल्डर्स कम्पनीले निर्माणका लागि ठेक्का लिएको छ । कम्पनीले झण्डै ४ करोड २५ लाखको लागतमा २५ मिटर लम्बाइको पुल निर्माण गर्न लागेको हो ।